कुनै पठनको लागि विभिन्न ढाँचाहरूको बच्चाहरूको पुस्तकहरू। | वर्तमान साहित्य
कुनै पठनको लागि विभिन्न ढाँचाहरूको बच्चाहरूको पुस्तकहरू।
प्रत्येक बच्चाको लागि एक पुस्तक।
किनभने प्रत्येक बच्चाहरुको लागी एक पुस्तक छ, सबै उमेरका लागि र सबै स्वादहरूको लागि। द्रुत गतिको संसारमा हामी बाँचिरहेका छौं र पढ्नका लागि धेरै तरिकाहरूका साथ, बच्चाहरूको किताबहरू हरेक दिन नयाँ चुनौतीहरूका लागि अनुकूल हुनै पर्छ। त्यसोभए तपाईंले योजना बनाउनु पर्छ नयाँ कथाहरूको लागि वा सबैभन्दा क्लासिकका लागि नयाँ ढाँचा। वा सबै सम्भावित विधाहरूको नयाँ संस्करणहरू प्रस्तुत गर्नुहोस्।
किताबहरु अन्तर्क्रियात्मक, पूरक गतिविधिहरू वा खेलहरूको साथ, अन्य भाषाहरूमा, ड्रप-डाउन वा त्रि-आयामिकको साथ। सब भन्दा कान्छो पाठकहरूलाई अपील गर्न, सबै भन्दा अनुभवी र माग गर्ने बच्चाहरू देखि। बजार अझै पनि ती सबैको लागि खोज्दै छ। र वास्तविकतामा, महत्वपूर्ण कुरा अझै छ बानीलाई प्रोत्साहित गर्नुहोस् कुनै पनि तरिकाबाट र कुनै पनि हिसाबले पढ्ने। यी। उदाहरणहरू हेरौं।
मसँग दुई भान्जी छ,6र years बर्ष। सब भन्दा पुरानो पहिले नै पढ्छ र मनपराउँदछ, र उनीहरु का कथाहरु पनि लेख्छ। सानी केटी पनि सहि ट्र्याकमा छ। Y म हरेक पटक किताब पसलहरूमा बाल साहित्य खण्डमा हिंड्दा पागल हुन्छु। पहिले, किनकि मलाई सबै कुरा मनपर्दछ र यसले मलाई यो मसँग लिन चाहान्छ। र दोस्रो, किनभने म मा आश्चर्य चकित छु स्वरूपहरूको महान विविधता र डिजाइनहरू जुन अहिले अवस्थित छन्।
सबै भन्दा परम्परागत ग्रन्थहरू दुबै ग्रंथमा र ढाँचामा हराइएको छैन, तर पछिल्लो संख्या बढेको छ। त्यसोभए यो असम्भव छ कि केही मूल भेटिएन। यी केहि शीर्षक हो।
1 चाउल बिरालो
2 शरीरको अंगहरु
3 एक पटक, सुनौलो कर्ल
4 एक दूरी ब्वाँसो
5 राजकुमारीहरूको ठूलो ब्रीफकेस
6 यहाँ देखि त्यहाँ सम्म
को पुस्तकहरु डा। सेस तिनीहरू उत्तर अमेरिकी पाठकहरूको धेरै पुस्ताको लागि एक सन्दर्भ हो। तर यो शीर्षक विश्वव्यापी बाल साहित्यको सबैभन्दा क्लासिक हो। यो पहिलो पटक प्रकाशित भएको थियो 1957। पहिलो पाठकहरूको उद्देश्य, हामीसँग छ rhymed पाठ अनुसरण गर्न धेरै सजिलो र धेरै हास्यास्पद, जसले उच्चारण र पढ्ने ताल विकास गर्दछ।
प्रकाशकबाट सुसाइटायी द्विभाषी पुस्तकहरू र प्रकाशकबाट टाँस्नुहोस् र कार्डबोर्ड पृष्ठहरू दुबैको शिक्षालाई सहयोग पुर्‍याउँछ स्पेनिश साथ साथै अंग्रेजी युवा पाठकहरूको लागि। आकारमा सानो र प्रतिरोधी, तिनीहरू विभिन्न अर्थशास्त्र क्षेत्रहरूबाट शब्दावलीको साथ शब्दकोशको रूपमा कार्य गर्दछन्। त्यहाँ छन् खाना, यातायात, जनावरहरू, संख्या, लुगा, रंगहरू...
एक पटक, सुनौलो कर्ल
बाट प्रकाशक एस.एम.। यो क्लासिक कहानी रिजोस डे ओरोको एक धेरै निःशुल्क रूपान्तरण हो जुन नयाँ पात्रहरू र कथाहरूलाई मिल्दछ। बाट मध्यम ढाँचा र हार्ड पास्ता, यसको संस्करण धेरै सावधान छ, सुन्दर चित्रणको साथ, र यो एक धेरै पूर्ण पुस्तक हो जुन सँग पाठ मिलाउनुहोस् पप-अप र ड्रपडाउनहरू.
एक दूरी ब्वाँसो
La Parramon प्रकाशक संग्रह बाहिर तानियो रचनात्मक कथाहरू, जुन यस्तो डिजाइन गरिएको हो कि बच्चाले सामग्री र पुस्तकको तयारीमा सक्रियतासाथ भाग लिन्छ। यसैले, तपाईं चित्र बनाउन, लेख्न, मेजहरू समाधान गर्न, काट्न, टाँस्न वा कथाको अंश पनि बन्न सक्नुहुन्छ। को अभिनव टेक्नोलोजी को लागी सबै धन्यवाद बढ्दो वास्तविकता.
तपाईंलाई आवश्यक छ मोबाइल फोन वा ट्याब्लेट अनुप्रयोग डाउनलोड गर्न त्यो अनुमति दिन्छ कि बढ्दो वास्तविकता प्रभाव, यसले आवाज, संगीत र अन्य तत्वहरू समावेश गर्दछ जुन अन्तर्क्रियामा मद्दत गर्दछ। गर्नको लागि कुनै पनि उमेर को पाठकहरुवयस्कहरू लगायत, जसले प्राय जसो बढी वा बढि सानाको रूपमा रमाईलो गर्दछ।
नायक, एउटा भोका जो भोक हडताल गर्दा समस्यामा दौडिन्छ र यसले उसलाई स्पष्ट सोच्न दिँदैन। तपाईं क्लासिक कथाहरूबाट अन्य पात्रहरू पनि भेट्नुहुनेछ जस्तो कि तीन साना सुअरहरू, लिटिल रेड राइडिंग हूड वा डराएन जुआन।
राजकुमारीहरूको ठूलो ब्रीफकेस
प्रकाशकबाट ग्यालरी, आफ्नो संग्रहबाट लिली छाँटोली। पाठकहरूका लागि सिफारिस गरिएको १5बर्षबाट, महान मा यो पुस्तक ब्रीफकेस ढाँचा हार्ड पेस्ट समावेश गर्दछ पाठ पढ्नकाे लागि, चित्रहरू रंग र अधिक २०० स्टिकर ती चित्रहरू पूरा गर्न you० पृष्ठहरूका सिल्हूटहरू तपाईंसँग छन्।
यहाँ देखि त्यहाँ सम्म
बाट प्रकाशक एस.एम. उसको ज्ञान यो सबै संग्रहबाट। बाट बच्चाहरूको लागि4वर्ष। एन ठूलो ढाँचा र हार्ड टाँस्नुहोस्। यो तथ्य र प्रश्नहरूले भरिएको छ, उदाहरणको साथ, को बारे मा चित्रण यातायात को माध्यम. सिकाई र रमाईलो युनाइटेड
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » किताबहरु » कुनै पठनको लागि विभिन्न ढाँचाहरूको बच्चाहरूको पुस्तकहरू।
"कन्फेब्युलेसन", कार्लोस डेल अमोरको नयाँ चीज
तपाइँ के लेख्नुहुन्छ त्यसलाई प्रसार गर्न ways तरीकाहरू